Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Dịkarịa ala, mmadụ 27 nwụrụ n'ọdachi ụgbọ mmiri English Channel
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Ịtụ egwu • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ọtụtụ ndị kwabatara n'ụzọ iwu na-akwadoghị hapụrụ n'ikpere mmiri dị na mgbago ugwu France karịa ka ọ na-emebu iji were ọnọdụ ọnọdụ oke mmiri dị jụụ na Wednesde, n'agbanyeghị na mmiri ahụ dị oke oyi.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-akwaga n'ụzọ iwu na-akwadoghị na-eji obere ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri na-agafe n'ọdụ ụgbọ mmiri Bekee amụbaala nke ukwuu n'afọ a, n'agbanyeghị nnukwu ihe ize ndụ nke ọdachi ndị nwere ike ime n'oké osimiri.
Dị ka ndị uwe ojii France na ndị ọrụ obodo si kwuo, opekata mpe mmadụ 27 anwụọla n'ọdachi kachasị ọhụrụ, ka ha na-agbalị isi n'ọdụ ụgbọ mmiri France gafere England mgbe obere ụgbọ mmiri ha kpuru n'akụkụ oke osimiri nke ugwu. Calais, France.
Onye isi obodo CalaisNatacha Bouchart, kwuru taa na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ dara na 27, nkeji ka onye isi obodo ọzọ kwuchara na 24.
Ndị uwe ojii France kwuru na opekata mpe mmadụ 27 anwụọla.
Franck Dhersin, onye osote onye isi ụgbọ njem mpaghara na onye isi obodo Teteghem nke dị n'akụkụ oke osimiri France kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ eruola 31 na mmadụ abụọ ka na-efu.
The UNOtu International Organisation for Migration kpọrọ ihe ahụ merenụ kacha ọnwụ otu onye na ọwa bekee kemgbe ha bidoro ịnakọta data n'afọ 2014.
Otu onye ọkụ azụ kpọrọ ndị ọrụ nnapụta mgbe ọ hụchara ụgbọ mmiri tọgbọrọ chakoo na ndị mmadụ na-ese n'elu mmiri na-enweghị isi n'akụkụ.
Ụgbọ mmiri atọ na helikopta atọ etinyela aka na nyocha a, ndị ọchịchị obodo kwuru.
Mịnịsta ala France Jean Castex kpọrọ ụgbọ mmiri ahụ kpuru “ọdachi”.
"Echiche m dị n'ebe ọtụtụ ndị na-efu efu na ndị merụrụ ahụ, ndị ndị omempụ na-ebupụ ndị omempụ na-erigbu ahụhụ na nhụsianya ha," ka o tweeted.
Mịnịsta ala UK Boris Johnson kwuru na "o juru ya anya na ọ wutere ya na ọ wutere ya nke ukwuu maka ọnwụ nke ndụ".
"Echiche m na ọmịiko m bụ ndị a tara ahụhụ na ezinụlọ ha na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ka ha tara ahụhụ. Mana ọdachi a na-egosi na ọ dị ize ndụ ịgafe ọwa n'ụzọ dị otú a, "ka ọ gbakwụnyere.
Johnson ṅụrụ iyi na gọọmentị ya “agaghị ahapụ okwute ọ bụla iji kwatuo atụmatụ achụmnta ego nke ndị na-ere mmadụ na ndị omekome,” mgbe ọ chịchara nzukọ nke kọmitii ihe mberede gọọmentị na-agafe.
Na mbido Wenezde, ndị ọrụ ime ime France kwuru na ụgbọ mmiri ndị France hụrụ ozu ise na mmadụ ise ndị ọzọ amaghị ihe ọ bụla n'ime mmiri ahụ mgbe onye ọkụ azụ gwara ndị ọchịchị.
Ihe omume a na-abịa ka esemokwu na-etolite n'etiti London na Paris maka ọnụ ọgụgụ ndị njem na-agafe na Channel.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-akwaga n'ụzọ iwu na-akwadoghị na-eji obere ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri na-agafe Channel amụbawo nke ọma n'afọ a, n'agbanyeghị nnukwu ihe ize ndụ.
Dị ka ndị ọrụ UK si kwuo, ihe karịrị mmadụ 25,000 abịarutela ugbu a n'afọ a, ugbua okpukpu atọ nke edere ede na 2020.
Britain agwala France ka o mee ihe siri ike megide ndị na-anwa ime njem ahụ.
Isi obodo Solomon Islands nọ n'okpuru iwu mgbochi mgbe ọgba aghara aghara
Spa abụọ US na Top 10 Kachasị Instagrammable Spas n'ụwa